SOMALITALK - DDP
Warsaxaafadeed: Ururka DDP
Maxamed Xasan Maxamud "Abgaalow"
Guddoomiyaha Ururka DDP:
February 07, 04
Warbixino soo gaarey Ururka DDP, kana soo gaarey degaanka ururka, ayaa sheegay in Daahir Riyaale uu dagaal soo wado (inkastoo aan xabad la isweydaarsan markii aan warkaan helay) maleeshiyadiisana lagu sheegay aagga Yagoori.
Wararka degaanku waxay sheegeen in kornayl Axmed Xasan Guure oo ku magac dheer "Axmed Raan" iyo rag kale oo u dhashay degaanka ay ka soo tageen maleeshiyada Daahir Riyaale, soona gaareen degaan kooda. Waxaa wararku sheegeen in kornalka oo ka tirsanaan jirey ciidankii lugta ee qaranka Soomaaliya uu iska soo tegey kaddib markuu arkay in Daahir Riyaale uu dagaal soo hurinayo iyo in loo sheegay in uu weeraro Xudun oo ah degaanka kornaylka. Waxana la sheegay in la rabey in kornaylka iyo dadka degaankiisa u dhashay laga dhigto gaashaan la isaga dhigo xabadda.
Haddaba ugu horayn Ururka DDP wuxuu halkan ku muujinayaa mowqifkiisa rasmiga ah in uu yahay mid katarjumaya dadka degaanka Sool, Sanaag iyo Cayn, dadkaas oo ah Puntland, oo ahaa Puntland, oo ahaan doona Puntland, sababtoo ah markii uu burburku ka dhacay Soomaaliya qolo walba deegaanka ay ku abtirsadaan ayey aadeen. Sidaas daraadeed ururka DDP wuxuu ka tarjumayaa siyaada guud iyo gaar ahaan Puntland.
Mar labaadka ururka DDP waxa uu halkan kasoo jeedinayaa laba baaq oo ah:
1. Gabay ayaa wuxuu ahaa: maandhow asxaan lagama tago eed haddaad faliye...
Sidii aan caadada u lahayn waxaan leenahay waar dagaalka hala joojiyo, oo nabada halaga shaqeeyo, haddii la diido waxaan u sheegeynaa beelaha dagaalka soo shidaya waa dad dagaalkana dhaqan u lahaa, marka wixii aad ka qaadaan ayaad leedihiin, haddaad samo iyo nabad diideen.
2. Waxaan kaloo baaq usoo jeedineynaa jaaliyadaha adduunka ku firirsan ee u dhashay degaanka in ay waxkasta nabada ka hor mariyaan, haddii laga fursan waayona ay u diyaar garoobaan dagaal difaac ah oo ay difaacanayaan degaankooda. Dadka degaanka joogaana waa in ay is difaacaan. Reer Puntlandna siday isu difaaci lahaayeen iyagay jirtaa.
Odayaasha iyo Isimada Awdal dega waxaan ka codsanayaa in ay qabtaan wiilkooda gardarada ku socda, oo berri ka maalin may-tirina waa la is yiraah daaye in aan baaq nabadeed idiin soo jeediyey ogaada.
Ilaahayna waxaan ka baryaayaa in uu colaadaas qaboojiyo.
Urur Siyaasi ah oo Lagaga Dhawaaqay Laascaanood
Guddoomiyaha ururka DDP oo ah Maxamed Xasan Maxamud "Abgaalow" ayaa SomaliTalk u xaqiijiyey in Guji 4/2
Afeef: Aragtida qoraalkan waxaa leh ururka DDP